Kukumbira Ruregerero kushamwari dzangu nevandinoshanda navo muChicago | Martech Zone
Kukumbira Ruregerero kushamwari dzangu nevandinoshanda navo muChicago
Chipiri, Gunyana 2, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kukokwa kuti utore chikamu muKushambadzira Profs B2B Kushambadzira musangano chaiva chiroto chakaitika! Mharidzo yangu yakanga yakanyatsogadziriswa uye ndakachengetera imba yangu kuRenaissance. Ini ndaitova nezvimwe Business Cards yakagadzirirwa chaizvo chiitiko! Ini handina kumirira kusangana neiyo chaiyo network yandakave ndakura pamusoro pegore rapfuura.
Ini ndaifanira kushanda Muvhuro uye hurongwa hwangu hwaive hwekutyaira Muvhuro manheru uye kuzorora pachirongwa chanhasi, Kuunza B2B Blogging kune iyo Nyowani Chikamu.
Ndiro raive zano.
Muvhuro mangwanani ndakazviwana ndaneta zvisingaite padhiraivha kuenda kubasa. Paive nenguva dzinoverengeka dzandinofunga kuti ndakarara pamagetsi matsvuku… hazvina kunaka. Zuva racho raive riine zvibereko, asi ini ndaive nechaikanganisa zuva rese nemamwe maronda asingaite. Nekutyaira kwangu kumba, ndaive ndakasvibira uye ndakachenuruka. Ndakasvika kumba uye husiku hwakadii! Ndakanga ndichiri kutarisira kuti zvimwe chaingova chinhu chandakadya uye ndakafunga kurega hotera uye kutyaira kumusoro pakati pehusiku. Na3AM, zvakadaro, ini ndaifanira kunyora shamwari dzangu pachiitiko ichi uye kuvaudza kuti hapana nzira yandaizo gadzira nayo.
Ini handigoni kunyadziswa! Iyi ndiyo yangu yekutanga 'hapana show' uye ini ndakapunzirwa kunze. Ndine urombo kuchikwata - kunyanya kune vese Kushambadzira Profs. Shelley akandinyorera zvakare netsamba yemutsa. Josh Hallett, Ann Handley, Deborah Franke, Phil Gomes, Christina Kerley, Alison Kutengesa. Uye ndanyadziswa kuti handina kuwana nguva yekuchinjana pfungwa neshamwari, Paul Dunay uye Kristian Andersen naizvo.
Mushure memaawa anenge gumi nemana ekurara kwakaputsika, ndiri kudzorera shure. Ndinofunga ndichaenda pamusoro bhasikoro pano mumaminitsi mashoma uye kuchovha kweawa. Ndinofanira kunge ndakagadzirira mangwana - imwe musangano wedunhu, WebCamp. Ini handisi kuzopotsa maviri akateedzana!
Mharidzo: Nei Bhizinesi Rako Rinofanirwa Kuva Blogging
Maitiro ekuvaka iyo Mepu Mifananidzo neCSS
Gumiguru 2, 2007 na3: 24 PM
Ndine urombo kunzwa kuti wanga usiri kunzwa mushe! Moyo wangu wakadzikira pandakamira ndokuona kumeso kudiki kwakasvibira, ndainetsekana kuti mangwana hausi kuWeb Camp. Ndinovenga kuti wakapotsa musangano uyu wanga uchitarisira… .asi ndinofara kuti urikunzwa zvirinani uye kuti uchave uchiuya kuWC mangwana. Yako nguva inogara ichikurudzirwa kwazvo. Ndokuwona mangwana!
Gumiguru 3, 2007 na2: 18 PM
Ndine urombo hauna kugona kuzviita! Yakanga iri heck yepaneru. Yakawanda nyaya dzakanaka, kuraira, uye kuseka. Ino inguva yangu yechipiri pane Josh-moderated pani uye aive akanaka.
Gumiguru 3, 2007 na2: 58 PM
Takusuwa, Doug. Ungadai wakave wakanaka kusangana newe uye unzwe kutora kwako.
Ndinovimba kuzobata mumwe musangano pane imwe nguva munguva pfupi, uye ndinofara kuziva kuti iwe uri pagadziriro!